Ny famakiako ankehitriny sy ny famerenako ny Wikinomics | Martech Zone
Ny famakiako ankehitriny sy ny famerenako ny Wikinomics
Alahady, Martsa 11, 2007 Alatsinainy Martsa 12, 2007 Douglas Karr
Wikinomics dia boky novakiako ho an'ny Indy Book Mashup (Book Club) eto Indianapolis. Raha ny marina dia tokony ho vita tamin'ilay boky aho, iray volana lasa izay, ary tokony hizotra Digital Aboriginal.
Misy antony matoa naharitra ela. Ity dia hevitro manokana momba ity boky ity, tsy hanaiky ahy ny olona sasany. Shel Israel (izay boky Resadresaka mitanjaka nanampy ahy hitarika bilaogy), tia Wikinomics! Noheveriko fa tena nitarina hatrany.
Tena manaja an'i Don Tapscott aho, mpanoratra izy izay miorina tsara amin'ny tontolon'ny asa sy ny haitao. Saingy ity boky ity dia nahakivy ny hamakivakiana ary tsy nanana fientanam-po tamin'ity dingana tsy mampino amin'ny fivoarantsika olombelona ity. Angamba handeha hiondrana an-tsambo aho fa ny Tambajotra sosialy dia sady mampifandray no manova an'izao tontolo izao, toekarena, demokrasia, orinasa, fananana ara-tsaina, ary fifandraisana araky ny fantantsika. Revolisiona io!
Na dia mamaky toy ny antontan-taratasim-piantohana aza izy io dia mety ho gaga ianao fa heveriko fa fahadisoana izany tsy hividy sy hamaky ity boky ity. Famakafakana lalina ny hetsi-panoherana Wiki miaraka amin'ireo tranga fampiasa faran'izay tsara niely nanerana. Raha mamaky azy io indray aho dia mamaky fotsiny ny Toko 8 amin'ny. Eto no misy ny henan'ilay boky.
Ny toko faha-8 dia milaza ny antsipirian'ny "The Global Plant Floor", heveriko fa ity dia mamintina ireo paikady tokony horaisin'ireo orinasa rehetra ny manoro hevitra ny hitondra any an-tsena:
Mifantoha amin'ireo mpamily sarobidy
Manampia lanja amin'ny alàlan'ny orkestra
Atsofohy ny fizotran'ny famolavolana haingana
Harness modular maritrano
Mamorona tontolo ekena mangarahara sy egalitera
Mizarà ny vidiny sy ny risika
Aza hadino ny fiambenana manaraka
Tsy manampy boky Wikinomics ao amin'ny lisitra famakiana voatondro, boky be loatra izany mba hitondrana mody ny hevi-dehibe. Amin'izao fotoana izao amin'ny famakiana manaraka, Ny Starfish sy ny Spider: ny herin'ny fikambanana tsy misy mpitondra.
Manana fanamarihana roa fanampiny hatao ankoatra ireo aho:
Saika vita aho Ny fahendren'ny kisoa manidina. Boky mahafinaritra ho an'ny mpitarika ny mametraka eo amin'ny latabatry ny alina na ny zoron'ny latabany. Jack Hayhow dia nanambara mazava tsara ny zavatra itovizan'ny mpitondra lehibe, miaraka amin'ny tantara maro loko sy ny teny manentanam-panahy.
SOAP'd: Fandaharana programa iray hafa
Endrey ny maha samy hafa ny tsiky iray!